श्वेतालाई मेनुकाको खुल्ला पत्र : `हाँसेको मुहार हेर्न आतुर छु` - dautarimedia.com
sanjay August 21, 2021 1 min read
बिहान बिहानै अनलाइनमार्फत श्रीकृष्णको उपचारको क्रममा निधन भन्ने समाचार पढेदेखि खल्बलिएको यो मन आजसम्म स्थिर भएको छैन भने तिम्रो मनभित्रको भुइँचालो, एक्लोपन, नैराश्यता र रोदन मैले अनुमान लगाउन सक्छु ।
मृत्यू निश्चित छ, तर यो निश्चिततालाई, यो सत्यतालाई मान्छेले सजिलै आत्मबोध गर्न सक्दैन । यो तिम्रो वा मेरो कुरा हैन, सम्पूर्ण मानवजातिले आफ्नो प्रिय वस्तु गुमाउनु पर्दा केही समय विचलित हुन्छ नै । झन् श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नामको व्यक्तित्व त तिम्रा लागि मात्रै हैन, सबैका लागि प्रिय थिए । नेपाली सिने क्षेत्रको चम्किलो तारा थिए । अब मन बुझाउने बाटो भन्नैपर्नै हुन्छ -उनस् भगवानका पनि प्रिय रैछन् ।
सडकमा हिँड्दा जताततै कोहिनुरको पोष्टरमा श्रीकृष्ण हाँसिरहेका देखिन्छन् । फेसबुक, टि्वटर, लेख, रचनामा बाँचिरहेका देखिन्छन् । अनि कसरी भन्नू उनको मृत्यू भएको छ ? मेरो मनले पत्याउ नै सकेको छैन ज्वाँइसा’व अब हामीबीच हुनुहुन्न भनेर सायद यसैलाई भनिन्छ होला अमरत्व ।
हो नानु, तिम्रा श्रीमानको मृत्यू भएको छैन, उनी अमर र अजम्बरी बनेका छन् । उनी अमर छन् भन्ने कुराको प्रमाण शव यात्रामा उर्लिएको त्यो मानव सागरले गरेको छ । शव यात्राको उर्लिँदो मानव सागरका वीचमा लुखुर-लुखुर म पनि थिएँ ।
खै किन हो कुन्नि, म जीवनमा सबै कुराको सामना गर्न सक्छु, तर बाध्यतावस एउटी महिलाले शीरदेखि पाउसम्म सेतो पहिरेको हेर्न सक्तिँन । तिम्रो त्यो उजाडिएको सिउँदो, भावविह्वल मुद्रा अनि अर्धचेत अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्न सक्ने र तिमीलाई सम्हाल्न सक्ने हिम्मत ममा थिएन । त्यसैले म तिम्रो छेउमा जाने चेष्टै गरिनँ ।
लडाइँमा युद्ध हारेको सिपाहीझैँ ज्वाइँसा’वको पार्थिव शरीर बोकेको गाडीको पछिपछि, यो पाइला स्वतस्फूर्त चलिरह्यो । बेलुकी ७ बजेतिर आर्यघाट पुगियो । त्यहाँ पनि श्रीकृष्णका प्रेमीहरु खचाखच भरिएका थिए । कुनैबेला त्यही ठाउँ सुनसान, उजाड लाग्थ्यो, तर त्यो दिन त्यही घाट साघुँरो भएको थियो । पाइला टेकेर उभिने ठाउँ कहीँ थिएन । सक्ने भए त्यो भीडले हाम्रा प्रिय श्रीकृष्णलाई यमराजको मुखबाट थुतेर ल्याउँथ्यो ।
नजिकैको पुलमा सञ्चारकर्मी मित्रहरुको भीडमा बसेर बेहोसीमै तिमीले अञ्जुलीले पानी खुवाएको अनि प्रेमपूर्वक एकोहोरो उनैलाई पुकारिरहेको दृश्यको साक्षी मात्रै बन्न सकेँ म । तिम्रो नजिकै गएर नानू नरोउसम्म भन्न सकिँन । किनकि यो बज्रपात यस्तो हो, जसले भोगेको छ, उसले मात्र अनुभूत गर्न सक्छ । तिमी रुँदै थियौ, कराउँदै थियौ । आर्यघाटमा उर्लिएका शुभचिन्तक तथा सर्वसाधारण पनि तिमीसँगै रुँदै थिए । सुँक्सुकाउँदै थिए ।
भीडमा कोहि भन्दै थिए, बिचरी साह्रै अभागी रैछिन् । कोही भन्दै थिए गर्भवती छिन् रे ! अनि कसैले भनेका शब्दहरु म यहाँ लेख्न पनि सक्तिँन । त्यो ठेलमठेलको भीडमा कसैले गरेको भलाकुसारीका अपाच्य शब्दहरु मेरा कानमा ठोक्किएपछि मलाई ती शब्दप्रति आपत्ति भयो । तर, माहोल प्रतिवाद गर्न सक्ने थिएन । त्यसैले बरु म आफै साइड लागेर बसेँ ।
बहिनी, हामीले आफूले आफैंलाई परिवर्तन गर्न सजिलो छ । तर, सदियौँदेखिका सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा अन्धविश्वासलाई सजिलै परास्त गर्न सकिँदैन । समाजले त के भन्दो रहेछ, के भन्दो रहेनछ । जताबाट हावा आउँछ त्यतै पात हल्लिएझै हल्लिन्छन् यी समाजका मान्छेहरु ।
Previous: कृष्ण जन्माष्टमीमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
Next: पुरा भिडियो हेर्न फोटो क्लिक गर्नुहोस्👇